စစ်တပ်တွေ စစ်သားတွေ ရဲ.ဖေါက်ပြန်မှုတွေ မှူတွေ စစ်တပ်တိုင်းမှာရှိတယ် ၊ ကမ္ဘာကျော် စစ်တပ်တွေမှာလဲ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိပါတယ် ၊ ဖုံးကြဖိကြတဲ့ကြားက ပေါ်လာတွေ တစွန်းတစဆိုသလို. ကြားရ သိရတာတွေရှိပါတယ် ၊ သူတို.ပြည်တွင်းမှာတော့ စစ်တပ်အတွက် နေရာမရှိပါဘူး မထင်နဲ၊ ကုလားကာနောက်ွကယ်မှာ ဘာတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မစိဘူး နော်၊ ပုလိပ်နဲ့. လက်နက်ကိုင် ပုလိပ်တွေရဲ. Shoot to kill မူကြောင့် ပုလိပ်တွေ လုပ်သမျှကို အကုန်မသိနိင်ဘူး သူတို.ပြောသမျှ လောက်ဘဲ. သိတယ် ၊
ပုလိပ်ပေးတဲ့ အချက်လောက်ဘဲ သတင်းစာတွေကဖေါ်ပြရဲတယ်။ ပုလိပ်ကိုဆန်.ကျင် သက်သေခံမဲ့သူ မရှိသလောက်ပါဘဲ ၊ ပုလိပ်ကလုပ်လိုက် ရင် အစ တုန်းတုန်းသွားတာတွေ အများကြီးပါ ၊ ရုံးတင်ဘို တရားခံ တောင် မရှိသလောက်ဘဲ ။ မသိခြင်အဆူံး ၊မမြင်ခြင်အဆုံး ဆိုရင် မှန်လိမ့်
မယ်။ ဒါတောင် အူမ မတောင့်လို. သီလ မစောင့်တာတွေ တပုံကြီး မပါသေးဘူး လေ ။
မှန်ပါတယ် ကျုပ်တို.ပြောနေတာ ကျုပ်တိုနိုင်ငံနဲ ကျုပ်တို. နိုင်ငံသားတွေ အကြောင်းပါ ။ ကျုပ်တိုနိုင်ငံ ကျုပ်တိုနိုင်ငံသားတွေ ကောင်းစားရေး တိုးတက်ရေးပါ ။ သူတိုနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှ မဆိုင်ပါဘူး လို ပြောခြင်ရင် ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေသိ ပြောပြောဘဲ ကိုရင် ၊ကျုပ်တို.ကိစ္စမှာ သူတို.မပါရင် မပြီးအောင် ကျုပ်တီု. ထဲ ကလူတွေ လုပ်ကြတာဘဲ မဟူတ်လား “သူခိုး ဒါးရိုးကမ်း” ဆိုတာ မျိုးပေါ။ အကျိုးဆက်ကတော့ ကျုပ်တိုရဲ လွတ်လပ်ရေး လွတ်လတ်ခွင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ခွင်.တွေ ဆူံရှုးနေပြီဆိုတာဘဲ ပေါ့။
တနည်းပြောရရင် “ “လူတင်ပါလို. နွားကျားကိုက်” ဖြစ်နေတယ် ကိုရင် ကြီးရဲ.?
အဲဒီတော့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ? စမ်းစစ်ရဘို.တနည်းက မြန်မာတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တန်ရဲ.လား ။ ဒီမိုကရေးစီ အတွက် အသင့် ဖြစ်ပြီလား ။ မဖြစ်သေးရင် နောက် ထပ် ၁၀ နှစ်လောက် ။ အဆိုရှိတဲ့ လူတွေကို အရေခွံ ဆုတ်၊ အသားခွေးကျွေး ၊ အရိုး နတ်တင် လုပ်ရလိမ်မယ် . ဒီလိုလုပ် နိုင်ဘို.လဲ ဥပဒေ ပြုရလိမ့် မယ် ။ ဥပဒေ စိုးမိုးစေခြင်တယ် ဆိုတာ ကိုး။ မောင် ပေါက်ကြိုင် ပုံပြင်မှာ ထောင်ပေးလို. ဆုတ် ၊ ရာပေးလို.ချုပ်၊ ချစ်သူအရိုး ဆံထိုးလုပ်ဆိုတာ ကြားဘူးတယ် ၊ မပျံနိုင်တဲ့ နဂါး ပေါက်ကြိုင်း ဒါးချက် မိသွားတယ်။.
စားမြုတ် ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာတွေ ကို ဂုတ်ပေါ် ဒါးမိုးပြီး အုပ်ချုပ်မှသာ ရမယ် ၊ တချိန်ထဲမှာ ဘဲ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်သူ ဟာ ဘယ်သူ.မျက်နှာမှ မထောက် ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ မင်းတို ကျင့်ရမဲ့ ကျင်စဉ်နဲ.အညီ အုပ်ချုပ်သွား ဘို. လို လိမ့်မယ် လို ပြောခြင်တယ် ။
တွေ.ကြအုံးမယ်လေ ပျော် ပျော် ပါးပါးပေါ့။